Taliyaasha Milateriga iyo Booliiska oo kormeeray Ciidamo loo diyaariyay dagaalka Jubbooyinka. |
Taliyaasha Milateriga iyo Booliiska oo kormeeray Ciidamo loo diyaariyay dagaalka Jubbooyinka.
Kismaayo–Daahir Aadan Cilmi Indha Qarsho taliyaha milateriga Soomaaliya iyo Bashiir Cabdi Maxamed taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa kormeeray Taliska Guutada 11-aad qaybta 43-aad ee Ciidamada Xoogga dalka ee Gobalada Jubbooyinka.
Ciidamadaan ayaa la sheegay in loo diyaarinayo dagaal ka dhan Al-shabaab kaas oo ka dhacaya Gobalada Jubbooyinka meelaha ay ka joogaan Al-Shabaab sida lagu sheegay hadal ay Jeediyeen Saraakiisha maanta booqday xaruntaasi.
Gen Indha Qarshe ayaa Ciidamada iyo Saraakiisha halkaasi ku sugan kula dar-daarmay in dalkooda ay u dhintaan daruuf kasta oo soo wajahda. Sidoo kale waxa uu kula dardaarmay in ay daadajiyaan dadaalada Al-shabaab looga saarayo Jubbooyinka.